အိမျဝယျပေးမယျဆိုတဲ့ အခကျြနဲ့ ရကျရျှဖို့ကို အသငျးပွောငျးဖို့ ကမျးလှမျးခဲ့တဲ့ မနျစီးတီး – Premier League Special
December 20, 2020 yeminn Article 0
ယူနိုကျတကျဆိုတာ ဘောလုံးအသငျးတဈသငျးတဈခုထကျပိုတယျ….သူ့မှာ လှပတဲ့ ပုံပွငျတှနေဲ့ သစ်စာတရားရှိတဲ့ကစားသမားတှရှေိကွတယျ…အဲ့သညျ့ထဲမှာ ရကျရျှဖို့ဆိုတဲ့ခြာတိတျကလေးတဈယောကျကလညျး ယူနိုကျတကျနဲ့ ပတျသကျလို့ ပွောစရာအကွောငျးအရာလေးတှနေဲ့….သူ့ရဲ့ခိုငျမာတဲ့ဆုံးဖွတျခကျြတှနေဲ့ပေါ့….
ယူနိုကျတကျ ရဲ့ တိုကျစဈမှူး ရကျရျှဖို့ကို မနျစီးတီးအသငျးဟာ မကျလုံးပေး စညျးရုံးသိမျးသှငျးဖို့ကွိုးစားခဲ့ဖူးပါတယျ။ ရှကျရျှဖို့ ဆယျကြျောသကျဘဝတုနျးက အသငျးပွောငျးဖို့ စညျးရုံးခဲ့တာပါ။ ၁၃ နှဈအရှယျ အကယျဒမီ ကစားသမားလေးရှကျရျှဖို့ကို အိမျနဲ့ တခွားလိုအပျတာတှေ ဝယျပေးမယျဆိုပွီး မနျစီးတီးက အတိတျတုနျးက ဖွားယောငျးခဲ့တာပါ။ ဒါပမေယျ့ ရှကျရျှဖို့တဈယောကျ မနျစီးတီးကပေးမယျ့ စညျးစိမျတှကေို မမကျခဲ့ဘဲ သရဲနီဘဝကိုပဲဆကျလကျခံယူခဲ့ပါတယျ။
ရှကျရျှဖို့ ရဲ့ ဆယျကြျောသကျဘဝတုနျးက အဖွဈအပကျြတှကေို ဖျောကောငျလုပျတဲ့သူကတော့ ငယျဘဝအသငျးဖျောဟောငျးတဈယောကျဖွဈတဲ့ ရော့ဆငျဘကျချလေ ဖွဈပါတယျ။ ” ရှကျရျှဖို့ ၁၃ နှဈအရှယျလောကျ တုနျးက မနျစီးတီး အသငျး က သူ့ကို ချေါဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပါတယျ။နအေိမျတဈလုံးနဲ့ လိုအပျတာ မှနျသမြှ ဝယျပေးမယျ ဆိုပွီး ကမျးလှမျးခဲ့ပါတယျ”
“ဒါပမေယျ့ ရှကျရျှဖို့က ယူနိုကျတကျ နဲ့ပဲ ဆကျပွီး သူ့ကစားသမားဘဝကိုဖွတျသနျးခဲ့ပါတယျ။ သူက မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျး အတှကျ အမွဲတမျး ကစားပေးခငျြနခေဲ့တာပါ “ဆိုပွီး ယူနိုကျတကျအကယျဒမီမှာ ကစားဖျောဖွဈခဲ့တဲ့ ရော့ဆငျဘကျချလကေပွောဆိုပါတယျ။ ယူနိုကျတကျရဲ့ မွို့ခံပွိုငျဘကျ မနျစီးတီးဟာ ရှကျရျှဖို့ ငယျစဉျက ဆငျးရဲတာကို ပိုကျဆံနဲ့ မကျလုံးပေးသိမျးသှငျးဖို့ ကွိုးစားခဲ့ဟနျတူပါတယျ။
ငယျစဉျက အခကျအခဲတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးရှကျရျှဖို့က ခုလိုပွောဆိုခဲ့ဖူးပါတယျ။ “ကလေးဘဝ တုနျးက အခကျအခဲတှအေမြားကွီးကွုံခဲ့ရပါတယျ။ ကြှနျတျော ထရိနျနငျ ကို လှဲခြျောတာမြိုး အကွိမျ အနညျးငယျ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ကို အမကေ လှဲရငျ ထရိနျနငျ ကို လိုကျပို့ပေးမယျ့သူ က မရှိခဲ့ဘူး။
အဈကိုတှကေ လညျး သူတို့အလုပျနဲ့ သူတို့ အဈမနှဈယောကျစလုံးက လညျး ကလေး ကိုယျစီ ရှိနကေတြော့ အဆငျမပွကွေဘူး။ အမကေ အလုပျက ပွနျတာ နောကျကတြဲ့ အခါတှမှော ကြှနျတျော ထရိနျနငျနောကျကတြတျပါတယျ။”
“ထရိနျနငျ လှဲတဲ့အခါ ကြှနျတျော အိမျမှာ ထိုငျပွီး ငိုနတေတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အမေ အလုပျက ပွနျမလာခငျ အထိပဲ ကြှနျတျော ငိုတာပါ။ နောကျဆုံးတော့ ကြှနျတျောငိုနတောကို အမမေိသှားခဲ့ပါတယျ။
ငိုရတဲ့ အကွောငျးအရငျး ကို အမသေိသှားတော့ကြှနျတေျာ့ကို ယူနိုကျတကျဆီ ထရိနျနငျ ပို့ပေးဖို့ တခွားလူတှဆေီအမအေကူအညီတှေ တောငျးခဲ့ပါတယျ။”
“အဲဒီနောကျ ကြှနျတေျာ့ကို ကားမောငျးပို့ပေးတဲ့ သူတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ထရိနျနငျ ကို ကြှနျတျော ရောကျနိုငျအောငျ သူတို့လုပျပေးခဲ့ကွပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ကူညီလုပျဆောငျပေးမှု တှေ သာ မရှိခဲ့ရငျ အကယျဒမီ ကစားသမား တဈယောကျ အခွအေနေ ကြှနျတျော ရောကျလာနိုငျမှာ တောငျ မဟုတျပါဘူး။
သူတို့တှကေို ကြေးဇူးတငျပါတယျ” ဆိုပွီးရှကျရျှဖို့က အကယျဒမီကစားသမားဘ၀ ခကျခဲမှုတှအေကွောငျးပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
အိမ်ဝယ်​ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ ရက်ရ်ှဖို့ကို အသင်း​ပြောင်းဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ မန်စီးတီး
ယူနိုက်တက်ဆိုတာ ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းတစ်ခုထက်ပိုတယ်….သူ့မှာ လှပတဲ့ ပုံပြင်တွေနဲ့ သစ္စာတရားရှိတဲ့ကစားသမားတွေရှိကြတယ်…အဲ့သည့်ထဲမှာ ရက်ရ်ှဖို့ဆိုတဲ့ချာတိတ်ကလေးတစ်ယောက်ကလည်း ယူနိုက်တက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောစရာအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့….သူ့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပေါ့….
ယူနိုက်တက် ရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ရက်ရ်ှဖို့ကို မန်စီးတီးအသင်းဟာ မက်လုံး​ပေး စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရှက်ရ်ှဖို့ ဆယ်​ကျော်သက်ဘ၀တုန်းက အသင်း​ပြောင်းဖို့ စည်းရုံးခဲ့တာပါ။ ၁၃ နှစ်အရွယ် အကယ်ဒမီ ကစားသမား​လေးရှက်ရ်ှဖို့ကို အိမ်နဲ့ တခြားလိုအပ်တာ​တွေ ၀ယ်​ပေးမယ်ဆိုပြီး မန်စီးတီးက အတိတ်တုန်းက ဖြား​ယောင်းခဲ့တာပါ။ ဒါ​ပေမယ့် ရှက်ရ်ှဖို့တစ်​ယောက် မန်စီးတီးက​ပေးမယ့် စည်းစိမ်​တွေကို မမက်ခဲ့ဘဲ သရဲနီဘ၀ကိုပဲဆက်လက်ခံယူခဲ့ပါတယ်။
ရှက်ရ်ှဖို့ ရဲ့ ဆယ်​ကျော်သက်ဘ၀တုန်းက အဖြစ်အပျက်​တွေကို ​ဖော်​ကောင်လုပ်တဲ့သူက​တော့ ငယ်ဘ၀အသင်း​ဖော်​ဟောင်းတစ်​ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရော့ဆင်ဘက်ခ်လေ ဖြစ်ပါတယ်။ ” ရှက်ရ်ှဖို့ ၁၃ နှစ်အရွယ်လောက် တုန်းက မန်စီးတီး အသင်း က သူ့ကို ခေါ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။နေအိမ်တစ်လုံးနဲ့ လိုအပ်တာ မှန်သမျှ ၀ယ်ပေးမယ် ဆိုပြီး ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်”
“ဒါပေမယ့် ရှက်ရ်ှဖို့က ယူနိုက်တက် နဲ့ပဲ ဆက်ပြီး သူ့ကစားသမားဘ၀ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။ သူက မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်း အတွက် အမြဲတမ်း ကစား​ပေးချင်​နေခဲ့တာပါ “ဆိုပြီး ယူနိုက်တက်အကယ်ဒမီမှာ ကစား​ဖော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရော့ဆင်ဘက်ခ်လေက​ပြောဆိုပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ရဲ့ မြို့ခံပြိုင်ဘက် မန်စီးတီးဟာ ရှက်ရ်ှဖို့ ငယ်စဉ်က ဆင်းရဲတာကို ပိုက်ဆံနဲ့ မက်လုံး​ပေးသိမ်းသွင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဟန်တူပါတယ်။
ငယ်စဉ်က အခက်အခဲ​တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးရှက်ရ်ှဖို့က ခုလို​ပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ “ကလေးဘဝ တုန်းက အခက်အခဲ​တွေအများကြီးကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် ထရိန်နင် ကို လွဲချော်တာမျိုး အကြိမ် အနည်းငယ် ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို အမေက လွဲရင် ထရိန်နင် ကို လိုက်ပို့ပေးမယ့်သူ က မရှိခဲ့ဘူး။ အစ်ကိုတွေက လည်း သူတို့အလုပ်နဲ့ သူတို့ အစ်မနှစ်ယောက်စလုံးက လည်း ကလေး ကိုယ်စီ ရှိနေကျတော့ အဆင်မ​ပြေကြဘူး။ အမေက အလုပ်က ပြန်တာ နောက်ကျတဲ့ အခါတွေမှာ ကျွန်​တော် ထရိန်နင်​နောက်ကျတတ်ပါတယ်။”
“ထရိန်နင် လွဲတဲ့အခါ ကျွန်တော် အိမ်မှာ ထိုင်ပြီး ငိုနေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေ အလုပ်က ပြန်မလာခင် အထိပဲ ကျွန်တော် ငိုတာပါ။ ​နောက်ဆုံး​တော့ ကျွန်တော်ငိုနေတာကို အ​​မေမိသွားခဲ့ပါတယ်။ ငိုရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ကို အမေသိသွားတော့ကျွန်​တော့်ကို ယူနိုက်တက်ဆီ ထရိန်နင် ပို့ပေးဖို့ တခြားလူ​တွေဆီအ​မေအကူအညီ​တွေ ​တောင်းခဲ့ပါတယ်။”
“အဲဒီ​နောက် ကျွန်တော့်ကို ကားမောင်းပို့ပေးတဲ့ သူတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထရိန်နင် ကို ကျွန်တော် ရောက်နိုင်အောင် သူတို့လုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးမှု တွေ သာ မရှိခဲ့ရင် အကယ်ဒမီ ကစားသမား တစ်ယောက် အခြေအနေ ကျွန်တော် ရောက်လာနိုင်မှာ တောင် မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့​တွေကို ​ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဆိုပြီးရှက်ရ်ှဖို့က အကယ်ဒမီကစားသမားဘ၀ ခက်ခဲမှု​တွေအ​ကြောင်း​ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။